ကြားသိသမျှ – Maythadin
May Thadin | November 24, 2021
Unicode သွေးသားရင်းမဟုတ်ပဲ တစ်ရွာလုံးရုပ်ချင်းဆင်နေပြီး အမွှာကျေးရွာပုံစံဖြစ်နေသည့် ထူးဆန်းသော ရွာငယ်လေး အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း Karnatakaပြည်နယ် Harragonaအမည်ရှိသော ရွာငယ်လေးတွင် နေထိုင်သည့် ရွာသူရွာသားအားလုံးသည် ထူးဆန်းစွာဖြင့် တူညီသော ရုပ်ရည်သွင်ပြင်တွေရှိကြရာ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ခွဲခြားရခက်လွန်းနေခဲ့သည်။ ရွာထဲတွင် နေထိုင်သော လူအယောက်ပေါင်း ၂၀၀သည် သွေးသားတော်စပ်ခြင်းမရှိပဲ မိဘတစ်ဦးတိုင်းစီမှ မွေးလာခဲ့သော သားသမီးများသည် မျက်နှာ၊ မျက်ခုံး၊နှာခေါင်း၊နှုတ်ခမ်း စသဖြင့်
ကွယ်လွန်ပြီး ၉ နှစ်ကြာသည့်အထိ ရုပ်အလောင်းက မပုပ်သိုးမပျက်စီးဘဲ တည်ရှိနေတဲ့ ယောဂီသူတော်စင်အမျိုးသမီး
May Thadin | November 2, 2021
Unicode ကွယ်လွန်ပြီး ၉ နှစ်ကြာသည့်အထိ ရုပ်အလောင်းက မပုပ်သိုးမပျက်စီးဘဲ တည်ရှိနေတဲ့ ယောဂီသူတော်စင်အမျိုးသမီး ယောဂီ သူတော်စင်အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ်အဘွား၏ မကွယ်လွန်ခင် အချိန်တုန်းက မှာကြားချက်အရ အဘွား ရုပ်အလောင်းကို ဆေးမစိမ် မီးမရှို့ ဆေးမထိုးဘဲ ဒီတိုင်းထားသော်လည်း အဘွား၏ ရုပ်အလောင်းမှာ ၉ နှစ်ကြာရှိသွားသည့်တိုင် မပျက်စီးသွားဘူးလို့ သိရပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းအရ
Unicode ည၈နာရီကျော်လောက်ကသင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ကိုရင်လေးက ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားပါဆယ်ဆွဲပြီး သင်္ချိုင်းကုန်းထဲဝင်သွားလို့လိုက်ကြည့်လိုက်သောအခါ မနေ့ည၈နာရီကျော်ကျော်ဆလောက်ကကျနော်လက်ဖက်ရည်သောက်ဖို့သောက်နေကျဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်….. ထိုင်ခုံကမရှိတော့ကိုရင်လေးထိုငိနေတဲ့စားပွဲမှာပဲဝင်ထိုင်လိုက်တယ် စားပွဲထိုးကောင်မလေးကကျနော့်အတွက်….လက်ဖက်ရည်ခွက်ချပေးနေတုန်းကိုရင်လေးကမေးလိုက်တယ်…. ဒကာမလေးးကိုရင်မှာထားတာကြာပီလေမရသေးဘူးးလားတဲ့….. ကျနော်လည်းးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်မေးလိုက်မိတယ်…. ကိုရင်ကဘာမှာထားတာလဲလို့….. ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားမှာထားတာ…..အဲဒါနဲ့ကျနော်လည်းးပြန်မေးလိုက်တယ်…..ကိုရင်ကဒီအချိန်စားလို့မရဘူးလေဆိုတော့….မဟုတ်ဘူးးအမေ့အတွက်တဲ့….. လက်ဖက်ရည်ခွက်ချပေးနေတုန်းကိုရင်လေးကမေးလိုက်တယ်…. ဒကာမလေးးကိုရင်မှာထားတာကြာပီလေမရသေးဘူးးလားတဲ့…..ကျနော်လည်းးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်မေးလိုက်မိတယ်…. ကိုရင်ကဘာမှာထားတာလဲလို့…..ချိုစိမ့်နဲ့ပဲနံပြားမှာထားတာ….. အဲဒါနဲ့ကျနော်လည်းးပြန်မေးလိုက်တယ်….. ကိုရင်ကဒီအချိန်စားလို့မရဘူးလေဆိုတော့…. မဟုတ်ဘူးးအမေ့အတွက်တဲ့…..မြို့ရှောင်လမ်းထဲရောက်တော့ဘယ်ဘက်ကိုချိုးဝင်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ သင်္ချိုင်းကုန်းထဲဝင်ခိုင်းတယ်ဗျာ….ကျနော်တော်တော်လန့်သွားတယ်ညက၈နာရီကျော်ပီလေ….. သင်္ချီုင်းကုန်းဆိုတာတိတ်ဆိတ်နေတာကြက်သီးတွေတဖြန်းဖြန်းထလာတယ် ဒါပေမယ့်ကျနော်ကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းခြုံထားတဲ့ကိုရင်လည်းပါတယ်ဆိုပီးအားတင်းဝင်လိုက်တယ်….. အဲဒီမှာကိုရင်ကဆင်းပီးဓါတ်မီးလေးနဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ပြီး…..အုပ်ဂူလေးးတစ်လုံးပေါ်တက်ထိုင်ပြီး…… အမေအမေကြိုက်တဲ့ချိုစိမ့်ရယ်ပဲနံပြားရယ်….သားလာပို့တာပါသားကိုခွင့်လွှတ်ပါအမေရယ်တဲအမေမသေခင်တုန်းကမပြုစုခဲ့ရတာတွေ…. သားအခုမှယူကြုံးမရဖြစ်နေပြီအမေရယ်တဲ့ အဲလိုတွေပြောပြီးတော့ကိုရင့်ကအဲ့ဒါကိုရင့်အမေရဲ့အုပ်ဂူလေးပဲတဲ့….. မသေခင်တုန်းကလုပ်မကျွေးနိုင်ခဲ့လို့အခုလာပို့တာပါလို့သူပြောတဲ့စကားနားထောင်းရင်း…. ကျနော်သူ့ကျောင်းထိပြန်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်….ကျနော်သံဝေဂတစ်ခုရလိုက်တယ်….. သူတောင်သေသွားတဲ့မိခင်ကိုသင်္ချီုင်းကုန်ထိလိုက်ကျွေးနေသေးတာ…. ငါတို့ကအခုအသက်ရှိနေတဲ့မိခင်ကိုပိုတောင်ဂရုတစိုက်ကျွေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့အသိတရားရလိုက်ပီလေ…..
Unicode ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းက လန်းပန်းခရိုင်နဲ့ ခရိုင်ချင်းကပ်လျက်ဖြစ်တဲ့ ဖရဲ့ခရိုင်မှာ ဒီအပတ်ထွက်သွားတဲ့ထီနောက်ပိတ် ၃ လုံးဂဏန်းကို တစ်ရွာလုံးလိုက်ထိုးရာက ရွာလုံးကျွတ်ပေါက်ကြရာ ဒိုင်ကမလျော်နိုင်တော့တာကြောင့် ရုန်းရင်းဆံခတ်ဖြစ် ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ရွာလုံးကျွတ်ပေါက်ခဲ့ကြတဲ့ ချဲလျော်ကြေးစုစုပေါင်းဟာ ဘတ်ငွေ ၇၄ သန်းခန့်ထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီမှာမှ အချို့ဒိုင်တွေကတော့ ထက်၀က်လျော်ပေးပေမယ့် ဒိုင်အတော်များများဟာ မလျော်နိုင်ကြတာကြောင့် ရွာသားတွေဟာ ချဲဒိုင်တွေရဲ့အိမ်ကိုဝိုင်းထားကြရာမှ ရဲတွေသွားရောက်ဖြေရှင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရွာထဲကရွာသားတစ်ဦးဟာ ပါကျဲရိုးကားအသစ်ဝယ်ရာက
Unicode ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ မော်ဒယ် ရွေရူပါဦးကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ မော်ဒယ်တစ်ယောက်လို့သူမကိုယ်သူမ ပြောနေကြပေမဲ့ ပရိသတ်တွေ.ကတော့ သူမကိုတပ်ချစ်သူလို့ပဲ သိထားကြပါတယ်နော်.တစ်ချို့.ဆိုရင်သူ.မကို ခုမှမြင်ဖူးတာ.ဆိုပြီးတောင် ရေးသားနေကြပါတယ်။ မကြာခင်ရက်ပိုင်းတုန်း.ကတော့ သူမကို အဘတွေ.က စီစဉ်ပေးမှုတစ်ခုကြောင် ချမ်းသာလာပြီဆိုလို့ လူတွေ..အကြား ပွဲဆူသွားရပြန်ပါ.တယ်နော်..အခုလဲ လူပြောများ.နေတဲ့ သူမရဲ့ခြေထောက်ဟာ လူတွေ ထင်နေသလို ဆင်ခြေထောက်မဟုတ်ကြောင်းသက်သေနဲ့.တကွ ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်နော် သူမရဲ့ ရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာများကို ပရိသတ်သိအောင်
May Thadin | September 13, 2021
Unicode တပ်ချစ်တဲ့ အဘသားသမီးတွေကတော့ အေးဆေးပဲဆိုပြီး ပုံလေးနဲ့သက်သေပြလာတဲ့ ယဉ်လတ် ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ်ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါ တယ်နော်။နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်း လုံးဝမပါဝင်ပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါ တယ်နော်။ ပရိသတ်တွေ ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန်နေပါပစေ လုံးဝကို မတုံ့ပြန်ပဲ အေးဆေးစွာနဲ့ နေနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ယဉ်လတ်ဟာဆိုရင် စစ်တပ်ထောက်ခံသူ အနေနဲ့ တင်မဟုတ်ဘဲ MWD